Cuntooyinka Cidhibta Ku Sugan 2022 - Cuntooyinka Gargaarka
Cuntooyinka Cidhibta 2022
Ogosto 11 @ 6:00 galabnimo - 9:00 pm
« Subaru La Wadaag Dhacdada Jacaylka
Nagu soo biir habeen cunto, madadaalo iyo moodo taageero Cuntada Lugaha ee magaalooyinka mataanaha ah. Cuntooyinka Cidhibta ku yaal waa munaasabada xagaaga ee sannadlaha ah halkaas oo taageerada Cunnooyinka Taayirrada ay ku soo ururin karaan, ku raaxaysan karaan cunto macaan oo ay kabohooda ugu wanagsan ku jiheeyaan fursad ay ku helaan abaalmarinno cajiib ah.
Ka qaybgalayaashu waxay ku raaxaystaan cunto kariye laga soo doortay qaar ka mid ah makhaayadaha maxaliga ah ee ugu wanagsan! Qiimaha tigidhku wuxuu kaloo ku siinayaa gelitaanka tartanka Swank Soles ee kabaha ugu quruxda badan ama ugu hal abuurka badan sida ay doorteen garsoorayaasha caanka ah oo ay u codeeyeen dhagaystayaashu.
Twin Cities Meals on Wheels Barnaamijyada waxay u adeegaan tirada ugu badan ee shakhsiyaadka, iyada oo in ka badan 1.7 milyan oo cunto ah ay u baxeen deriskeena sannadkii hore! Taageeradaada ka qayb galka xafladan ayaa taasi suurtogal ka dhigaysa.
nagu soo biir Waa maxay Waqooyi Bari Minneapolis 6-9 galabnimo Khamiis, Agoosto 11, habeen aan la ilaawi karin! Wax badan ka baro dhacdada oo ka iibso tigidhada Cuntadaonheelsevent.org.
6:00 galabnimo - 9:00 galabnimo
Minneapolis, MN 55418 Maraykanka + Khariidadda Google